Seddex jibaarista Gawaaridaada Blog-ka oo ay la socdaan Booqdeyaasha Khuseeya | Martech Zone
Sedex-jibaarista Gawaaridaada Blog-ka ee booqdayaasha ay khuseyso
Arbacada, Juun 1, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Bob Burchfield wuxuu ahaa saaxiib waqti dheer wuxuuna ka mid ahaa ragga ugu wanaagsan halkan Indianapolis. Wuxuu u yimaadaa dhammaan dhacdooyinka gobolka wuxuuna leeyahay tan ugu ballaaran Kalandarka dhacdooyinka Indianapolis gobolka AroundIndy.com. Bob ayaa ii dhigay qoraalkan maanta:
Waxaan rabaa inaan idinla wadaago wax ku saabsan mashruuc yar oo blog ah oo socdey bishii la soo dhaafay. Mid ka mid ah CVB-da degmada (xafiiska iyo booqdayaasha xafiisyada) ayaa weydiiyay haddii ay u qori karaan baloog martida Blog AroundIndy.com. Waxaan daabacay maalin kasta (iyo usbuucii dambe) illaa 2008, laakiin waligood uma isticmaalin wax aan ka ahayn liistada 10 ee ugu sareysa waxyaabaha lagu sameeyo Indianapolis usbuuca soo socda. Marka markaan helay codsigan waxaan is idhi, maxaa loo furi waayey dhamaan CVB-yada gobolka iyo goobaha aaga? Marka waxaan casuumaad u diray ilaa 100 ka mid ah e-mayl. Qodobbadu waxay bilaabeen inay yimaadaan habeenkii. Waxaan bilaabay inaan daabaco mid maalin kasta, subax kasta 6 subaxnimo, 16-ka May.
Waa hagaag ……… ..
Toddobaadka May 16-22, taraafikada barta ayaa kor u kacday 77.5% laga soo bilaabo usbuucii hore. Toddobaadka May 23-29, taraafikada ayaa TRIple ahayd usbuucii hore. Gadiidka bishii May 2011 wuxuu ahaa 128.6% ka sareeya ka badan May 2010. The blog martida 30 May dhigay a diiwaanka taraafikada hal maalin, ilaa 79.1% laga bilaabo kii hore ee hal-maalin sare ahaa.
Waxa iigu xiisaha badan aniga ayaa ah haddii aan ka soo xusho kelmado weedho ka mid ah baloog kasta oo aan sameeyo raadinta Google, waxay ku tuseysaa bogga ugu horreeya ee natiijooyinka raadinta Google saacad gudahood markii la soo dhejiyo.
Dhiirrigelinta dadaalkan waxay ka timid akhriska Blogging Corporate for Dummies. Marka waxaan kaliya u qorayaa inaan ku idhaahdo "waad ku mahadsan tahay" dhamaan caawimaadda, talo bixinta, taageerada, iyo macluumaadka wanaagsan ee aad ila wadaagtay (iyo ardaydayda) tan iyo markii ugu horreysay ee aan ku kulannay Southside Smoosiers (wali waan u xiisay kulammadaas Koobka Bean).
Bob Burchfield, Tifatiraha
Waad ku mahadsan tahay Bob waqtiga uu igu siiyay inuu qoro. Tani waa sababta aan u qornay buugga! Waxaan rabnaa in dadku ay ku koraan awooddooda iyo ku-xirnaantooda khadka tooska ah iyagoo adeegsanaya xeelado waxqabad leh, lana cabbiri karo. E-mayllada noocan ahi waa kuwa wejigayga dhoola-caddeeya oo i tamariya!
Sinnaanta Warbaahinta Bulshada iyo Soo Laabashada Maalgashiga
Jun 1, 2011 at 10: 18 PM
Waxaan u baahanahay inaan akhriyo buuggaaga! Waxaan ku cusubahay blogga oo waxaan u baahanahay dhammaan caawimaadda aan heli karo!
Jun 1, 2011 at 10: 22 PM
Hubso inaad iska qorto joornaalkeena, sidoo kale. Waxaan wadaagnaa talooyin toddobaad kasta!
Jun 1, 2011 at 10: 23 PM
Waxaan u baahanahay inaan akhriyo buuggaaga! Waxaan ku cusubahay blogga.
Jun 1, 2011 at 11: 14 PM
Waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay inaan markale akhriyo.
Jun 2, 2011 saacadu markay ahayd 12:38 AM
Valerie, waxaad tahay xiddig caan ah!